ဒဿနသိပ္ပံ -၀၁ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← အသစ်ထွက် စာအုပ်
ဘာသာ​ရေး သာသနာ​ရေးဆိုတာ — →
ဒဿနသိပ္ပံဆိုင်ရာ အယူအဆများကို အိုင်းစတိုင်းက သူ့ရဲ့ ရူပဗေဒအခြေခံများ (The Fundaments of Theoretical Physics) စာစုမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးတယ်။
ဖော်ပြပုံမှာ “The sense-experiences are the given subject-matter.” အာရုံသိတွေက သဘာဝကပေးထားတဲ့ (Natural given) လို့ သတ်မှတ်ပြီး အဲဒီ အာရုံတွေကို ပြန်လည်စုစည်း ဖြေရှင်းဖို့ တည်ဆောက်တဲ့ သီအိုရီကိုတော့ (Man-made) လူက လုပ်ရတာလို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
“But the theory that shall interpret them is man-made.”
လူလုပ်တယ်ဆိုတော့ မှားနိုင်မှန်နိုင်တာပေါ့။ သဘာဝက ပေးထားတာဆိုတော့ မှားနိုင်မှန်နိုင်တယ်လို့ ပြောခွင့်မရှိတော့ဘူး၊ ဒါက သဘာဝရဲ့ ပေးထားချက်ကိုး။ အဲဒီ သဘာဝရဲ့ပေးထားချက်ကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် သီအိုရီ သဘောတရားရေးရာ ခြုံငုံဖွင့်ဆို တည်ဆောက်တဲ့အပိုင်းကျတော့ လူတွေကလုပ်လို့ မှားနိုင် မှန်နိုင်ပါတယ်။
(The sense-experiences are the given subject-matter. But the theory that shall interpret them is man-made. It is the result of an extremely laborious process of adaptation: hypothetical, never completely final, always subject to question and doubt./ The Fundaments of Theoretical Physics )
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သဘာဝတရားကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ခြုံငုံပြီးတော့ သီအိုရီဖွဲ့ကြတယ်။ သီအိုရီဖွဲ့ တဲ့အခါမှာ ဖွဲ့ပုံဖွဲ့နည်းရှိတယ်။ ဒီသီအိုရီက အနာဂါတ်ဖြစ်ရပ်တွေကို ကြိုတင်ပြောဟောကိန်းထုတ်ရ တယ်။ ဒါကတော့ (Prediction) အပိုင်း ပါဝင်တာပေါ့။ (Prediction) အပိုင်းမှာ သီအိုရီတစ်ခုဟာ ကြိုတင်ပြော ဟောကိန်းထုတ်လိုက်လို့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်သဘာဝနဲ့ကိုက်ရင် အဲဒီ့သီအိုရီဟာ အင်အား ကောင်းတာပဲ အဆင့်မြင့်တာပါပဲ။
“Each time new experiments are observed to agree with the predictions the theory survives, and our confidence in it is increased;”
ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ သီအိုရီက ကြိုတင်ပြော ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေဟာ သဘာဝဖြစ်ရပ်နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီသီအိုရီဟာ အားနည်းသွားပြီ။ ဒါမှမဟုတ် ပြုပြင်ရန်လိုပြီ။ သို့မဟုတ်လည်း ဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်ပေ့ါ ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။
“.. but if everanew observation is found to disagree, we have to abandon or modify the theory.”
ဒီတော့ အိုင်းစတိုင်ဟာ ရူပဗေဒကိုဖွင့်ဆိုရင်းနဲ့ ဒဿနအမြင်များကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခဲ့တာကို တွေ့ ရပါတယ်။